China PACSystems RX3i Allen Bradley - Ndị na - eweta ya - ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ HuiTong
Tformlọ ọrụ ọgụgụ isi GE
Nlele QP & Nchịkwa
.Lọ > Ngwaahịa > Tformlọ ọrụ ọgụgụ isi GE > PACSystems RX3i
PACSystems RX3i bu ọgbọ ohuru nke usoro njikwa elu-elu. Ọ nwere ọrụ njikwa ike karịa PLC ọdịnala ma kuchie ihe njikwa na-emeghe. Otu ikpo okwu maka otutu ihe, mejuputara ngwa ngwa, nwere ikike kasịnụ, dịkwa mfe iji bulie akụrụngwa dị ugbu a.
PACSystems RX3i bu uzo gi nke Internet Internet. Enwere ike inyocha ma na-ejikwa usoro nrụpụta niile na ezigbo oge ọ bụla n'ụwa. Dochie nkwụsịtụ mmezi a na-eme na ntinye amụma oge iji gbochie ọdịda na-enweghị nhazi na ọdachi.
PACSystems RX3i abụghị naanị ikpo okwu dị ike na ikike PLC. O nwekwara ihe ndị pụrụ iche na-emegharị anya na-eme ka ị pụọ na asọmpi ahụ.
PACSystems Rx3i nwere njiri mara ihe ichoro nke PLC.
Ihe eji emechi igodo nke PACSystems RX3i (Logic, Motion, HMI, Njikwa usoro na nnweta dị elu dabere na Nkà na ụzụ ebe nchekwa Emerson) na-eme ka arụmọrụ ọrụ na mgbanwe dị mfe.
Site na GE Intelligent Platforms PACSystems RX3i ike nyocha gị bụ nke akparaghị ókè enwere ike ịhazi ya site na iji ngwaọrụ emeghe na ngwa ngwanrọ pluggable â € “na-enye gị ohere iwelata downtime, bulie arụmọrụ, na mgbanwe ahịa na njikwa ike zuru oke.
HTI n’enye otutu usoro PACSystems RX3i IC69 ka ị choo si. Nabata email anyị n’oge ọ bụla. Anyị ga-ekwupụta maka ngwaahịa dị elu nwere ọnụ ahịa dị mma.
Ika:GE / General Electric
Nkọwapụta NgwaahịaNchịkwa ike maka RX3i CPE400 NA-AK .ZI
Lineï¼š NgwaahịaPACSystems RX3i
Ï¼dị Productï¼šCPUs RX3i
Ọnọdụ:Obu mbu ohuru
Akwụkwọ ikike:Onwa iri na abuo N'uwa nile
GỤKWUO Ziga Achọta More
Nkọwapụta NgwaahịaIgwe nnọchi maka CPE400 Energy Pack
Nkọwapụta NgwaahịaRX3I CPL410 NA IGBO ENWETA
Nkọwapụta NgwaahịaRX3I CPE302,1 SER, 1 ETH PORT
Nweta NgwaahịaXšPACSystems RX3i
â € ‹Ọnọdụ:Obu mbu ohuru
Nkọwapụta NgwaahịaCPE305 single slot CPU, 1.1Ghz processor, 5 na ebe nchekwa onye ọrụ, ọdụ ụgbọ mmiri RS-232 (eriri dakọtara na eriri IC693CBL316), 1 ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet (SRTP na Modbus). Withgbọ mmiri jiri PAC Energy (IC695ACC400 na eriri njikọ IC695CBL001).
Nkọwapụta NgwaahịaCPE310 2 slot CPU, 1.1Ghz processor, 10 Mg memory, 1 RS-232 ọdụ ụgbọ mmiri, 1 RS- 485 ọdụ ụgbọ mmiri, 1 ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet (SRTP, Modbus) na ọdụ ụgbọ mmiri USB Master. Dochie anya maka IC695CPU310. Shipsgbọ mmiri CPE310 na Energy PAC (IC695ACC400 na IC695CBL001).
PACSystems RX3i Allen Bradley na-ere, nnukwu ngwaahịa na ngwaahịa, nke HuiTong Mmeputa Co; Ltd.D choro ugwo ala ahia nke ndi ahia ahia nke ndi ahia ahia ndi ahia anyi bu ndi ahia gi?
Adreesị: E303, Silicon Valley Building T1, Qing Quan Rd LongHua ShenZhen China
2711p-t6c20d8 nkọwapụta ngwaahịa mmetụ aka
Omume puru iche na uzo nke n-tron switches
© nwebisiinka 2020-2021 Hulọ Ọrụ Mmepụta HuiTong Agụghị Ikike niile echekwabara.